Sida Lacag Looga Sameeyo Lacag Kaash Ah Kaydka App-ka - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Sida Looga Sameeyo Lacag Kaash ah kaydka App-ka
Isticmaale Cash App ah oo soo dira oo ku hela lacag bilaash ah goobta, waxa laga yaabaa inaad raadinayso sida lacag looga sameeyo Cash App. Cash App-ka hadda waxa uu siiya isticmaaleyaasheeda awood ay ku iibsadaan, iibiyaan, ugana ganacsadaan kaydka iyaga oo u maraya Maalgelinta Cash Appka.
Si aad lacag uga samayso App-ka Cash, fikradda fudud waa in la iibsado oo la iibiyo kaydka. Si aad sidaas u samayso, waxa kaliya ee ay tahay inaad samayso waa inaad marka hore abuurto App-ka Casharka cusub ee cusub, haddii aanad mid lahayn. Kadib, kaliya ku xidh akoonkaaga bangiga App-kaga Casharka.
Haddii aad raadinayso inaad dhuuso suulkaaga biyaha kaydka, ka dib Maalgelinta Lacagta App-ka ayaa laga yaabaa inay adiga uun kuu ahaato taasina waxay kuu caddayn doontaa dambe ee maqaalkan. Sidoo kale, waxaad heli doontaa dulmar habka loo iibsado iyo iibinta saamiyada App-ka lacagta caddaanka ah.
Waa maxay Maalgelinta App-ka Cash?
Madal-maalgelinta Lacagta Cash App-ka waa mid cusub, oo la bilaabay rubucii ugu dambeeyay ee 2019. Waxa ay siisaa isticmaaleyaasha awood ay ku iibsadaan oo ay ku iibiyaan kaydka, iyo sidoo kale ka ganacsiga Bitcoin waana habka ay isticmaalayaashu lacag uga helaan kaydka Cash App-ka.
Lacagta Cash App-ka Maalgelinta waxa kale oo ay siisaa isticmaaleyaasha awood ay ugu wareejiyaan maalgashigooda dilaaliinta kale oo ay sameeyaan maalgashi toos ah. Intaa waxaa dheer, Maalgelinta Cash App waxay ka shaqeysaa labada aaladaha Apple iyo Android.
Kharashyada Maalgelinta Hoosta App-ka Kaashka ah
Sida markaad isticmaalayso Cash App si aad u dirto ama u hesho lacag bilaasha; marka ay timaado lacagaha Cash Apps ee la maalgalinayo sidoo kale, waxa kaliya ee aad u baahan doonto waa $1 si aad u bilowdo maal-gashi, ka bacdina, waxaad bixin doontaa ku dhawaad ​​waxba. Ma jiraan wax kharash ah oo dayactir ah bishii, ma jiro guddi ganacsi, iyo ma jiraan shuruudaha dheelitirka ugu yar.
Haddii aad saxiixdo, waxaad haysataa saddex ikhtiyaar oo aad ku maalgashan karto: saamiyada, lacagaha lagu beddelo ganacsiga (ETF), iyo Bitcoin. Iyadoo ay taasi jirto, adeegga fudud ee adeegga ayaa ah doorasho wanaagsan oo loogu talagalay qof kasta oo raba in uu cagahooda ku qoyo maalgashiga, isagoo bixinaya khidmadaha hoose.
Haddii aad raadinayso inaad maal gashid maalgelinta wadaagga ah, curaarta, fursadaha, hantida ma guurtada ah, ama maalgashiyada kale, waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso abka maalgashiga kale. Haddii aadan imaan blog-gan markii ugu horeysay markaas waa inaad ogaataa in inta badan maqaaladeena ay ku barayaan sida loo sameeyo iyada oo loo marayo goobo kala duwan, baro xirfado iyo sidoo kale waxaan ku siineynaa dib u eegis ku saabsan goobaha caanka ah ee jira.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka Maalgelinta App-ka kaashka ah
Goob kasta oo lacag lagu sameeyo waxay leedahay faa'iidooyin iyo khasaare. Mid ka mid ah madal si uun ama mid kale ayaa leh labadaba kor iyo dhinacba oo la mid ah Cash App.
Mid ka mid ah xaqiiqooyinka aan la dafiri karin ee ku saabsan App-ka Casharka ayaa ah, Maalgelinta Lacagta Cash App-ka waxaa loogu talagalay inay noqoto mid fudud in la isticmaalo intii suurtagal ah. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee aan maalgashadayaasha ahayn waxay ka cawdaan waa "ma garanayaan sida loo bilaabo." Maalgelinta App-ka Cash, way fududahay.
Si fudud u fur Cash App-ka, go'aanso inta aad rabto inaad ku maalgeliso saami gaar ah, oo iibso. Appku wuxuu u baahan yahay inuu ururiyo macluumaadka sharci ahaan looga baahan yahay sida lambarkaaga Bulshada, laakiin waa hawl fudud oo degdeg ah. Si ka sii wanaagsan waxaan mar dambe kuu qaadi doonaa tillaabooyinka bilaabista.
Guddiyo eber ah
Maalgelinta App-ka kaashka ah kama dalaco komishannada wax kala iibsiga saamiyada. Waxaan horay u caddaynay in waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u bilowdo maalgashiga kaydka App-ka Cash waa ugu yaraan $1.
Maalgelinta saami qaybsiga
Kuwa aan haysan lacag caddaan ah oo badan oo u dejinaya maalgashiga oo weli doonaya inay maalgashadaan kaydka yar ee ay haystaan, Maalgelinta Cash App-ka waa mid ka mid ah fursadaha yar ee maalgashadayaasha doonaya awoodda ay ku iibsadaan saamiyo jajab ah. Tusaale ahaan, si aad u iibsato hal saami oo Amazon.com ah, waxaad u baahan doontaa in ka badan $3,525 laga bilaabo Noofambar 2021. Iyada oo la adeegsanayo Cash App Maalgelinta, waxaad ku iibsan kartaa qayb ka mid ah kaydka aad ugu jeceshahay ugu yaraan $1.
Aaladaha Cilmi-baarista oo aan ku filnayn
Cash App-ka ma bixiso marin u helka agabka cilmi baadhista ama agab waxbarasho. Madal waxaa loogu talagalay bilowga maalgashadayaasha iyo kuwa kaliya oo doonaya in ay faraha suulasha gelin suuqa saamiyada oo waa in ay bixiyaan sida.
Cash App-ka ma siino nooc kasta oo kaalmo goobta ah isticmaalayaasha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay qof caajis ah oo ku jira maalgashiga saamiyada, waxaad ku heli kartaa caawimo adiga oo si joogta ah u jooga blogkan.
Talaabooyinka la raaco marka ganacsiga la gelinayo Cash App
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad ganacsi ugu dhigto App-ka Cash waa inaad lacag ku haysato baaqigaaga oo aad taas ku samayn karto adiga oo lacag ugu wareejinaya Cash App-ka. Waxaad lacagta uga wareejin kartaa akoonkaaga bangiga akoonkaaga App-ka Cash ama waxaad isticmaali kartaa wax kasta oo hadhaaga App-ka kaashka ah si aad u iibsato kayd. Sida laga soo xigtay website-keeda, waxaad iibsan kartaa saamiyada adoo qaadaya 6 tillaabo:
1. Guji tab maalgashiga ee shaashadda gurigaaga
2. Taabo baararka raadinta oo hel tock adiga oo gelaya magaca shirkadda ama calaamadda calaamadda
3. Dooro shirkadda aad rabto inaad maalgashato
4. Dooro qaddarka dollar ee la sii dajiyay ama geli qaddar gaar ah
5. Raac tilmaamaha si aad u xaqiijiso macluumaadkaaga
6. Ku xaqiiji macaamilka PIN-ka ama Aqoonsiga taabashada
Cash App waxa kale oo uu leeyahay sifo kale oo wanaagsan oo loo yaqaan "Auto-Invest". Iyo sida magacaba ka muuqata, Auto-Invest waxay kuu ogolaanaysaa inaad jadwal u sameysato wax iibsiga si toos ah, si aadan xitaa uga welwelin wakhtiga ama qiimaha. Haddii aad raadinayso inaad iibsato saamiyo qaybo yaryar in muddo ah, markaa Auto-Invest waa hab nadiif ah, oo sahlan oo tan lagu sameeyo.
Talaabooyinka iibka saamiyada ee Appka Cash
Haddii aad la yaaban tahay sida loo iibiyo stock App Cash ka dib iibsashada in muddo ah, markaas waxaad ku farxi doontaa inaad ogaato inay tahay wax sahlan in la sameeyo. Sida iibsashada saamiyada ee App-ka Cash, iibintu waa hab fudud. Sida ay ugu jirto websaydka App Cash si aad u iibiso saamiyadaada, waxaad u baahan doontaa:
1. Fur Cash App
2. Guji calaamadda "maalgelinta" ee shaashadda guriga ee Cash App
3. Guji ilaa aad ka gaarto "My Portfolio"
4. Guji shirkadda aad rabtid inaad iibiso saamigeeda
5. Guji iibka
6. Dooro mid ka mid ah qaddarka la sii dajiyay ama guji sumadda saddexda dhibcood si aad u geliso waxaad rabto
7. Ku xaqiiji iibkaaga Touch ID ama geli PIN kaaga Waxay qaadan kartaa ilaa 2 maalmood oo shaqo inaad ka soo muuqato hadhaaga App-ka Cash ka dib markaad xaqiijiso iibkaga.
Kaydka App-ka Cash ee ugu Fiican ee la Maalgelin karo
Ogaanshaha kaydka ugu fiican ee la iibsan karo waxay noqon kartaa go'aan adag. Maalgelinta ayaa noqonaysa mid adag maalintii, xitaa lacag caqli leh. Waxaanu ku talinaynaa kaydka App-ka Casharka ah ee ku salaysan adeegyada alaabta, gaar ahaan haddii ay la xidhiidho xawaaladaha lacagta, lacag caddaan ah ama lacag-bixinta lacag la'aanta ah, boorsooyinka dhijitaalka ah, habaynta lacag bixinta, iyo fintech.
Kaydka liiskayaga waxaa lagu soo doortay iyadoo lagu saleynayo aasaaskooda iyo rajada laga qabo kobaca muddada dheer ee ku saleysan sifooyinka ganacsiga ee muhiimka ah.
Uber (UBER) Lacagtu waa boorso dhijitaal ah oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha inay maareeyaan oo ay dhaq-dhaqaaqaan lacagtooda oo ay arkaan dakhligooda iyo taariikhda kharash-garaynta. Dakhliga rubuci kowaad ee shirkadda fuulay sanadkan waxa uu yimid $2.90 bilyan, hoos 11% sannadkiiba.
Saamigu wuxuu helay 29% laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay. Dhammaadka rubuci hore ee 2021, 130 maalgalin oo kayd ah oo ku jira kaydka daanyeer Insider ayaa yeeshay saamiyo qiimahoodu dhan yahay $10.5 bilyan gudaha Uber Technologies, Inc.
Lahaanshaha 127 haystayaasha hedge fund, Rubuci saddexaad ee 2021, Apple Inc. (AAPL) dakhliga rubuci saddexaad ee shirkadda wuxuu ahaa $81.43 bilyan, taasoo kordhaysa 36% sannadkii, taasoo garaacday qiyaasaha dakhliga $8.09 bilyan.
Qaybta adeegga ee shirkadda, oo ay ku jiraan Apple Pay, Apple TV+, iyo App Store, waxay arkeen 28% dakhligoodu kor u kacay ilaa $17.5 bilyan, laga soo bilaabo $13.7 bilyan isla muddadaas 2020.
Apple waxa ay samaynaysay wax wanaagsan tobanaan sano oo aan hal mar (AAPL) niyad jabin kuwa haysta, gaar ahaan faa'iidada dheer; waxa la odhan karaa waa kaydka joogtada ah ee la iibsado.
Shirkadda Alibaba Group Holding Limited waxay ku saleysantahay Maraykanka.
Ali Baba Group waa mid ka mid ah shirkadaha fintech ee ugu weyn adduunka. Waxay ka shaqeysaa adeegga lacag-bixinta elektiroonigga ah ee AliPay ee Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) meheradaha e-commerce ee Taobao Marketplace, iyo AliExpress.
Intaa waxaa dheer, dakhliga rubuci kowaad ee shirkaddu wuxuu kordhay 34% sannadkii ilaa $31.8 bilyan. Kooxda Ant Group waxay ku xisaabtantay ku dhawaad ​​$696 milyan Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) iyada oo kaliya $285 bartilmaameedka qiimaha saamiga ah.
Shirkadda Fintech ee fadhigeedu yahay Mareykanka waxay ka shaqeysaa bixiyeyaasha xalinta lacag bixinta, kuwaas oo kala ah PayPal, Xoom, Venmo, iyo Hyperwallet, si loo magacaabo dhowr. Dhammaadkii rubuci hore ee 2021, 143 sanduuq oo kayd ah oo ku jira kaydka xogta daanyeerka ayaa haystay saamiyo qiimahoodu dhan yahay $14.7 bilyan ee PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL), oo hoos uga dhacday 147 rubuci hore oo qiimahiisu ahaa $15.9 bilyan dhammaadka rubuci hore ee 2021.
143 sanduuqa hedge ee kaydka xogta daanyeer Insider waxay haysteen saamiyo qiimahoodu dhan yahay $14.7 bilyan ee PayPal Holdings, Inc.
App-ka Cashu ma u fiican yahay kaydka?
Maalgelinta saamiyada waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo xirfadaha la aasaasay si lacag looga sameeyo adduunka. Isticmaalka codsiyada saaxiibtinimada leh sida Cash App-ka ayaa ka dhigay xirfadan mid la heli karo qof kasta oo caadi ah.
Waa maxay ganacsiga maalinlaha ah?
Ganacsi maalmeedku waa marka aad iibsato oo iibiso saami isku mid ah isla maalinta suuqa. Waxaa muhiim ah in la ogaado in nidaamka ganacsiyadani aysan waxba ka jirin. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad dejinayso dalabka iibka, oo ay ku xigto dalabka wax iibsiga ee isla maalintaas, tan weli waxaa loo tixgelin doonaa ganacsi maalmeed.
Haddii aad eegayso sida lacag looga sameeyo kaydka Cash App-ka markaas Cash App Investing waxaa loogu talagalay labada maal-gashadayaasha bilawga ah iyo kuwa hadda jira ee raba inay faraha lugahooda ku geliyaan suuqa saamiyada ama isku dayaan inay maalgashadaan goobo cusub oo maalgashi iyagoo ku maalgelinaya lacag yar oo buluug ah- chip (tayo sare leh) saamiyada.
Kuma habboona maalgashadayaasha jecel inay laftooda lafaguraan kaydka, maadaama aanay heli karin cilmi-baadhis saami qaybsi saddexaad ah. Waxaan wali ku guuleysanay inaan si fiican uga hadalno sida aad lacag uga samayn karto kaydka Cash App-ka waxaana sidoo kale kuu samaynay tallo kayd afar kayd ah oo ku salaysan rikoodhka raadraaca iyo joogtaynta saamiyada.
lacag caddaan ah.app
Sidee Si aad Lacag uga soo Gudbiso App-ka Cashuuraha ah una Gudbiso Akoonka Bangiga
Cashapp Vs Venmo: Waa kee Wanagsan App-ka Lacag-bixinta Mobilka
10 Barnaamijyada Maalgelinta ee ugu Fiican ee Bilowga ah
Lacag samaynta waligeed uma muuqan wax ka wanaagsan. Haddii aad rabto inaad ogaato siyaabo aad ku heli karto 10 dollars…
Iyada oo masiibada adduunka ee dhowaan dhacday oo aragtay in badan oo naga mid ah ayaa ku xirnaa gudaha guriga maalmo, dad badan…